Shiinaha nooca caanka ah Warshad soo saare sariir jilicsan oo warshad leh iyo soo saareyaal | Qiangdi
Waxaan nahay soo saare mashiinada wax soo saarka budada.
Muhiimad ahaan, waxaan bixinnaa naqshad loogu talagalay mashiinka, injineernimada, nidaamka xakamaynta si loo daboolo shuruudaha wax soo saar ee macaamiisheena. Waxaan nahay alaab-qeybiye.
Waxaan bixinaa xalka loogu talagalay soosaarida budada.
Kooxdayada mashruucu waxay ku shaqeysaa iyada oo ku saleysan xog-ururin tijaabo ah oo wax ku ool ah oo leh in ka badan 5000 warbixinno tijaabo ah oo ka badan 1000 maaddo kala duwan oo ka socda warshadaha macdanta, warshadaha kiimikada, warshadaha cuntada iyo beeraha, warshadaha dawooyinka iwm
Hordhaca nidaamka tijaabada alaabada-ku hagaaji 'ganaaxa alaabada sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha
Si toos ah u biloow mashiinada nidaamka ilaha hawada.
Bilaab barnaamijka PLC. Adoo si buuxda u xakameynaya inta jeer ee wareega fasalka, xakamaynta alaabada.
Ku darista alaabta ceyriinka ah ee lagu raro buunshaha ama quudinta aaladda QDF-120 mishiinka, Waxaan qaadan karnaa habka nuugista hawada iyada oo loo marayo cadaadis aan fiicnayn si loo quudiyo maaddada; mashiinnada wax soo saarka, qashinka dufanka ama quudinta bacda ayaa la heli karaa si loo qanciyo shuruudo kala duwan.
Aruurinta alaabooyinka la dhammeeyay iyadoo loo eegayo dariiqooyinka macaamiisha, Waxaad si toos ah ugu soo ururin kartaa alaabada dhammaatay baaldiyo, ama waxaad ku xirmi kartaa mashiinka wax lagu xiro.
1 .Ha kor u kicin heerkulka: heerkulku ma kordhin doono maadama qalabka lagu jajabiyey xaaladaha shaqada ee balaadhinta sambabada iyo heerkulka godka wax shiidaya ayaa caadi laga dhigayaa.
2. Faddarayn la'aan: geeddi-socodka oo dhan waa wasakh la'aan-maadama qalabka ay dhaqaajinayaan qulqulka hawada iyo dhulka iyada oo loo marayo isku dhaca iyo saameynta dhexdooda iyaga oo aan ku lug lahayn warbaahinta. Si buuxda is-shiidi, Sidaas qalab waa raagaya iyo daahirnimada wax soo saarka waa sare in la barbardhigo. Shiidi ku jira nidaamka xiran, boodh hoose iyo buuq, habka wax soo saarka nadiif ah oo bey'ada u fiican.
3. Adkaysi: Waxaa loo adeegsadaa walxaha adkaanta mohs ee ka hooseeya fasalka 9aad, maaddaama saamaynta wax lagu shiido ay ku lug leedahay oo keliya saamaynta iyo isku dhaca miraha halkii ay ka dhici lahayd isku dhaca darbiga. gaar ahaan qalabka leh adkaansho sare, daahirnimo sare iyo qiimo sare oo lagu daray.
4. Nidaamka xakamaynta miisaanka, saxsanaanta sare, ikhtiyaar, xasiloonida wax soo saarka sare.
Naqshad ikhtiyaari ah oo qarxin-caddayn ah, ayaa sidoo kale loo casriyeyn karaa nidaamka wareegga nitrogen si loo buuxiyo shuruudaha farsamaynta shiidi kara ee aadka u ganaaxa ee walxaha ololaya iyo waxyaabaha qarxa.
5.Waxaa la heli karaa cabbirka walxaha D50: 1-25μm.Good walxaha wanaagsan, qaybinta cabbirka qaybta walxaha. Raadiyaha kala-saxa-sare ee hogaaminaya adduunka oo leh xariijin xawaare ah illaa 80m / s, hubinta saxsanaanta sare ee shuruudaha wax soo saarka.Soomaha gawaarida waxaa xakameynaya beddelaha, cabbirka walxaha si xor ah ayaa loo hagaajin karaa. Gawaarida kala-soocida ayaa si toos ah u kala soocaya maaddada si hawo leh, ma laha wax qallafsan. Wax soo saarka budada Ultrafine waa mid deggan oo lagu kalsoonaan karo.
Heerkul joogto ah ama heerkul hoose, shiidi dhexdhexaad ah, gaar ahaan ku habboon alaabada kuleylka xasaasiga ah, barta dhalaalaysa oo hooseysa, sonkor leh, dabeecad kacsan.
7.Qiyaasta isticmaalka tamarta sare, kor u qaadida qulqulka maaddada, hagaajinta waxtarka baaritaanka budada.
Qaybaha muhiimka ah sida shaashadda gudaha, kala-saaridda giraangirta iyo biiyaha waxaa laga sameeyaa dhoobada sida aluminium oksaydh, zirconium oxide ama silicon carbide, hubinta xiriir la aan biraha oo dhan shiidi for daahirsanaanta sare ee finalka.
Nidaamka xakamaynta 9.PLC, hawlgal fudud.
10.Mashiinka waxaa lagu xiri karaa suunka si loo kordhiyo xawaaraha isla markaana looga gudbo dhibaatada matoorrada xawaaraha sare leh iyadoon lahayn nooca mootada ee caanka ah.
Waxaa loo isticmaali karaa si taxane ah oo loo kala saarayo heerar kala duwan si loo soo saaro alaabooyin cabbirro badan leh hal mar.
Mashiinka Pneumatic ee dareeraha leh ee QDF ayaa burburin kara waxyaabaha soo socda ee gaarka ah marka lagu daro qalabka caadiga ah.
Qalabka adag ee adag: carbide tungsten, carborundum, aluminium oksaydh, silikoon oxide, silikoon nitride, iwm
Wax daahir ah oo sare: wax super-qabashada, dhoobada gaarka ah, iwm
Waxyaabaha kuleylka ah ee kuleylka leh: caagagga, daawada, toner, waxyaabaha dabiiciga ah, iwm.
Wax soo saarkayagu inta badan waxaa loo isticmaalaa warshadaha ka hooseeya Hada waxaan helnay suuq qaan gaar ah oo ku saabsan kiimikada Beeraha. Laakiin waligeen kama joojinayno baacsigayaga heer sarre iyo ku habboon in aan barano macaamiisha si aan ugu siino adeeg wanaagsan iyo xalal
Xiga: Isticmaalka Gaarka ah ee Mill-Jet Mill-sariirta Qalabka Fudud ee Qalabka Adag